जब आफ्नै ससुराले बुहारीलाई खु’कु’री देखाउदै नि’र्बस्त्र पार्थे, श्रीमानले नै गर्थे यस्तो!(भिडियो) – KhabarTime
जब आफ्नै ससुराले बुहारीलाई खु’कु’री देखाउदै नि’र्बस्त्र पार्थे, श्रीमानले नै गर्थे यस्तो!(भिडियो)
काठमाडौ । महिलाहरु अहिले घर भित्रै असुरक्षित भएका घटना सार्वजनिक भएका छन् । परिवारले सबै भन्दा सुरक्षित महशुष गर्ने ठाउँ भनेको घर हो । तर घरकै ब्यक्ति नै महिला माथि नराम्रो दृष्टि राख्छ भने महिला कसरी सुरक्षित हुन्छ ? हालै झापाको भद्रपुरमा भएको एक घटनाले यस्तै देखाएको छ । भद्रपुरकी एक महिला विवाह गरेर श्रीमानको घर गएकी थिइन् । तर उनलाई ससुराले नै नराम्रो दृष्टि राखे ।
सो कुरा महिलाले आफ्नो श्रीमानलाई भन्दा श्रीमानले उल्टै श्रीमतीलाई या त ना दिए । उनले श्रीमतीलाई संरक्षण गर्नुको साटो झन बुवाकै साथ दिएको गाउँलेको पनि भनाई छ । घरमा ससुराले आफुलाई यस्तो गरेको कुरा माइतमा आएर सुनाउँदा दिदीहरु गएर ससुरालाई यस्तो नगर्नु भन्दा तिमीहरुलाई पनि त्यस्तै गर्छु भनेर चे’ता’वनी दिएको बताए ।
सासुको निधन भएका कारण ससुरा एकल हुन् । उनले छोराको विवाह गरेपछि वुहारी माथि नराम्रो दृष्टि राखे । र क्सी खाएर बुवा छोरा संगै आउथे । छोराले बुवावाट श्रीमतीलाई बचाउनु भन्दा पनि ससुराकै कोठामा श्रीमतीलाई धकेलेर पठाउने गरेको उनले बताएकी छन् । घटना गराएको भोलीपल्ट उल्टै गाउँको चिया पसलमा गएर मलाई कसले के गर्न सक्छ ? मैले यस्तो गरे भनेर सार्वजनिक गरे पछि प्रहरी आएर लिएर गएको महिलाका दिदीहरुले बताएका छन् ।
यो सबै ज्वाईका कारणले भएको हो, दिदी बहिनी भन्छन् हामीले गएर सम्झाउँदा पनि ज्वाईले बहिनीकै दोस देखाउनुभयो । पहिला पनि यस्तै घटना भएकाले गाउँवाट निकालिएको उनीहरुको भनाई छ । भद्रपुर नगरपालिका ६ मा २२ वर्षकी बुहारीलाई ५९ वर्षका ससुराले यस्तो घटनामा प्रहरीले ससुरालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
०७७ साल फागुन १ गते शनिवार, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्यफल यस्तो छ...